Semalt विशेषज्ञ: क्लोकिaking, किवर्ड स्टफिंग, लिंक एक्सचेन्ज र अन्य ब्ल्याक ह्याट एसईओ टेकनीकहरू
Semalt विशेषज्ञ: क्लोकि,, किवर्ड स्टफिंग, लिंक एक्सचेन्ज र अन्य ब्ल्याक ह्याट एसईओ टेकनीकहरू
विश्व परिवर्तन हुँदै जाँदा, व्यक्तिहरू उनीहरूको समस्याहरूको समाधान अनलाइनमा गर्दै छन्। गुगल आफ्नो दैनिक एल्गोरिथ्म सुधार गर्दैछ। धेरै मार्केटरहरू हाल SEO मा निर्भर छन् आफ्नो स्तर निर्धारण गर्न। त्यहाँ एसईओ विशेषज्ञहरु द्वारा गैरकानूनी, अनैतिक प्रविधिहरु प्रयोग गरिएको छ। तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर, जे होस्, तपाईं गुगलको कालोसूचीमा तपाईंको डोमेन प्राप्त गर्न जोखिम उठाउनुहुन्छ।
आधारभूत SEO अभ्यासमा ALT ट्यागहरू, शीर्षक ट्यागहरू मेटा विवरण ट्यागहरू र XML साइटम्याप खोज ईन्जिन बट्सलाई मार्गनिर्देशन गर्नका लागि समावेश गर्दछ जुन ती तपाईंको सामग्री मार्फत क्रल हुन्छन्। प्रत्येक पृष्ठको लागि अनुपम शीर्षक ट्यागहरू प्रयोग गर्न सिफारिस पनि गरिन्छ। जब तपाईं एसईओ खरगोश प्वालको गहिराइमा जानुहुन्छ, तपाईं अभ्यासहरू आउनुहुनेछ जुन तपाईंको एसईओ रैंकिंगलाई हानि पुर्‍याउँदछ कि तपाईंले उनीहरूले सोचेको ट्राफिक बिना नै ल्याउँदछ। यी अभ्यासहरू "ब्ल्याकहाट प्रविधिहरू" को रूपमा परिचित छन्। गुगलले परिष्कृत पाण्डा र पेन्गुइन एल्गोरिदमहरू छ कि तिनीहरूलाई सुन्न पनि सक्छन्। Igor Gamanenko, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, तिनीहरूलाई तल रेखांकित गरेको छ।
क्लोकि भनेको कालो टोपी एसईओमा प्रयोग गरिएको टेक्निक हो, जसमा Google लाई बेवकूफ बनाउने फरक सामग्री देखाउँदै र प्रयोगकर्ताहरूलाई अर्को वेब पृष्ठमा उनीहरूले भ्रमण गरिरहेको स्थानको सट्टामा लैजान समावेश गर्दछ। र यो अब सम्म सबैभन्दा दुरुपयोग गरिएको SEO प्रविधि हो। उदाहरण को लागी, तपाईले कोड बनाउनु भयो जसले गुगललाई सोच्दछ कि तपाईं लाइभ मिलान अपडेट सहितको वेब पृष्ठमा यातायात पुनःनिर्देशित गर्दै हुनुहुन्छ जब तपाईं वास्तवमै तिनीहरूलाई ई-वाणिज्य स्टोरमा लैजानुहुन्छ। गुगलले यसको मालप्याक्टिसहरू पत्ता लगाउन यसको एल्गोरिदम प्रयोग गर्दैछ। यदि तपाईं समातिएमा, तपाईंलाई गुगलबाट प्रतिबन्धित गर्न सकिन्छ वा अन्तिम पृष्ठमा सूचीबद्ध प्राप्त गर्न सकिन्छ
लिंक एक्सचेन्ज अर्को कालो टोपी एसईओ अभ्यास हो जब वेबमास्टर्सले आपसमा लिंकहरू साटासाट गर्छन्। धेरै जसो केसहरूमा, यी कम लि quality्क हुन्छन् र सामग्री लि links्कमा असम्बन्धित छन्। विगतमा यसले काम गर्‍यो, यो अब त्यति प्रभावकारी छैन। यो छोटो समयमा लि getting्कहरू प्राप्त गर्ने द्रुत तरीका हो, तर यसले तपाईंको रैंकिंगलाई सुधार गर्दैन।
सामग्री नक्कल गर्दै
अन्य साइटहरुबाट सामग्री प्रतिलिपि गर्न अब काम गर्दैन। गुगलले मात्र अनुक्रमणिका अद्वितीय र नयाँ सामग्री। तपाईले प्रतिलिपि गरेको सबै सामग्री खेर फालनेछ। त्यसोभए नयाँ अद्वितीय सामग्री सिर्जना गर्न समय खर्च गर्नु राम्रो हुन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको WordPress WordPress ब्लगमा डुप्लिकेट सामग्री छ कि छैन भनेर जान्न चाहानुहुन्छ भने www.shoutmeloud.com मा जानुहोस्।
लि Bu्कहरू खरीद गर्दै
केहि समय पहिले, वेबसाइटहरू केहि डलर को लागी हजारौं क्लिक प्रदान गर्थे। यसले लिंकले तपाईंको श्रेणीको %०% निर्धारण गर्छ भनेर विचार गर्दै यसले राम्रोसँग काम गर्यो। जब गुगलले यसको एल्गोरिथ्म अपडेट गर्‍यो, यसले ती सबै स्प्याम्मी वेबसाइटहरू लि selling्कहरू बिक्री गर्ने फेला पारे र तिनीहरूलाई दण्डित गर्‍यो। यसले ती लिंकहरू किनेकोलाई पनि दण्ड दियो।
कीवर्ड स्टफिंग तब हुन्छ जब तपाइँ तपाइँको कुञ्जी प्रत्येक अन्य वाक्य पछि दुरुपयोग गर्नुहुन्छ। यो केहिमा अधिकार भएको खराब छैन तर, किवर्डलाई हरेक चोटि दोहोर्‍याउँदै र त्यसपछि तपाइँको पाठकहरूको लागि आँखा हो र तपाइँको एसईओ प्रयासहरूलाई चोट पुर्‍याउँछ।
यसको मतलब तपाईंको पृष्ठभूमिमा समान रंगमा तपाईंको पाठको तल कुञ्जी शब्दहरू समावेश गर्दछ। सेतो पृष्ठमा सेतो पाठ मनपर्दछ। तपाईं मानिसहरूलाई मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईं गुगलको बट्सलाई मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्न। ती तपाइँको स्रोत कोड लुकेका पाठको लागि जाँच्छन्। तिनीहरूसँग झूट बोल्ने प्रयास गर्दा उनीहरूले तपाईंलाई दण्ड दिन सक्दछन्।
के तपाईंले कहिल्यै वेब पृष्ठ भ्रमण गर्नुभयो जुन लिंकहरू मात्र भरिएको थियो? लिंक फार्महरू वेबसाईटहरू हुन् जुन लिंकहरू साटासाट गर्ने उद्देश्यको साथ होस्ट गरिन्छ। गुगल यस विचारको बिरूद्ध छ। तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि तिनीहरूबाट टाढा बस्नु भनेको सजाय पाउनु भन्दा सुरक्षित छ। हैन?
यसले अर्को वेबसाइटबाट सामग्री प्रतिलिपि गर्दैछ र लेखलाई दोहोर्याउन सफ्टवेयर प्रयोग गर्दैछ। स्वचालित सामग्री जेनरेशन सफ्टवेयर को उपयोग गरी यो कोटि पनि पर्छ। जब तपाईं खोज ईन्जिनलाई मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईंको दर्शकहरूले स्पामयुक्त सामग्रीको मज्जा लिने छैनन्।
तिनीहरू भन्छन् कि धेरै नै विषाक्त छ। के तपाईंलाई थाहा छ SEO को लागि तपाईंको सामग्री अप्टिमाइज गर्ने तपाईंको विरुद्धमा काम गर्दछ?
कम गुणस्तर र अप्रासंगिक सामग्री
जहाँसम्म तपाईं कता र कम-गुणवत्ता सामग्रीबाट रैंकिंग गुमाउनु हुँदैन, तपाईं आगंतुकहरू गुमाउनुहुनेछ। त्यस्ता सामग्री तिनीहरूलाई दूर पठाउँछन्, र गुगलले यो देख्नेछ।
त्यहाँ धेरै "विशेषज्ञहरू" छन् विभिन्न SEO प्रविधिहरूमा सल्लाह दिदै। तपाईले प्रयोग गर्ने तरिकाहरूमा सावधान हुनुहोस्। औंठाको नियमको रूपमा तपाई कहिले पनि गुगलको वेबमास्टर उपकरणहरूको साथ गलत गर्न सक्नुहुन्न।